Lalao malagasy - Fanorona, PlayStation 4, Rajoelina Andry, F
ⓘ Lalao malagasy - Fanorona, PlayStation 4, Rajoelina Andry, Fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara 2013, Ravalomanana Marc, Wiki, 9 Janoary, Ambohidrabiby ..
Ny fanorona dia lalaon-tsaina nenti-paharazana malagasy. Olon-droa no mifanandrina aminizany ary mandany ny vatonilay mpifanandrina ny tanjona, toy ny ady. Rehefa maty kosa ilay mpifanandrina iray, dia azo avela koa dia miroso aminny fomba filalaovana antsoina hoe vela ny mpifanandrina roa, mba ahafahanilay maty taminny voalohany ho afa-bela. Ny tanjonny fanorona dia tsy ny hamono ihany, fa ny mamelona ihany koa ilay mpifanandrina maty taminny lalao voalohany. Ny fanorona ihany angamba ny lalao eto an-tany izay tsy mamono ihany fa mamelona ihany koa. Marihina fa fady ny miloka aminny fanor ...
Ny PlayStation 4 na PS4 dia ny fahavalo taranaka lalao video console avy aminny Sony Solosaina fialam-Boly. Nanambara toy ny mpandimby ny PlayStation 3 nandritra ny fanolorana taminny 20 febroary ny taona 2013. Ny PlayStation 4 mifaninana aminny Wii U ny Nintendo, ary ny Xbox One ny Microsoft. Ny PlayStation 4 manana AMD processeur mifototra manodidina ny x86-64 fampianarana napetraka. Ity dia natao mba hanao lalao fampandrosoana mora kokoa, ny fisarihana ny lehibe isan-karazany ny mpamorona. Ireo fiovana ireo dia milaza ny andrana Sony ho nihatsara ny alalan ny lesona nianarana nandritra ...
I Andry Rajoelina no iantsoana and Rajoelina Andry Nirina teraka tamin ny 30 Mey 1974. Mpanao pôlitika malagasy ary mpanana radio sy televiziôna. Izy no ben ny tanànan Antananarivo nanomboka ny 12 Desambra hatramin ny 3 febroary 2009 mialoha ny nametrahany ny fahefana ho an i Michelle Ratsivalaka izay nosoloina koa an i Edgard Razafindravahy avy any Ambohimalaza toa an i Rajoelina. Nanao ny fianianana amin ny maha Filohan ny Tetezamita azy izy ny 21 Martsa 2009 na dia tsy nankatoavin ny fianakaviam-be iraisam-pirenena aza izany. Nentiny tamin izany ny taratasy avy amin ny fitsarana avo mom ...
Marc Ravalomanana no filohanny Repoblikani Madagasikara nanomboka ny 6 Mey 2002. Teraka tao Imerinkasinina tao Antananarivo izay renivohitri Madagasikara, manambady Lalao Ravalomanana ary manan-janaka efatra. Na teo aminny resaka politika na taminny ara-barotra teo aminny fiainany manokana, dia olona miavo-tena izy. Fanaovan-dronono kely anny fianakaviana no notantaniny ka nanjary lasa orinasa ngeza, taminny alàlanny fanampianny Banky iraisam-pirenena sy ny fanohananny governemanta taminizany fotoana. Teraka ny orinasa TIKO, mampiasa olona 5000 mivantana sy asa 100 000 hafa ; ary raisina h ...
Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatinny sehatra iray aminny tranonkala ka ahafahanny mpitsidika rehetra nomena alàlana hanova ny votoatinny pejy ao anatiny. Manamora ny fiaraha-manoratra lahatsoratra ny wiki, koa rehefa olona maromaro no miara-mamolavola lahatsoratra iray dia tena ahitana tombontsoa ny mampiasa wiki. I Ward Cunningham no namorona ny wiki voalohany taminny taona 1995, taminny ampahanny sehatra iray miresaka momba ny programmation informatika, ary WikiWikiWeb no anarana nomeny anizany. Avy aminny teny hawaianina hoe wiki wiki, izay midika hoe "maikamaika" na " ...
1935 – Bob Denver, Amerikanina mpilalao maty taminny 2005 1959 – Rigoberta Menchú, Goatemala mafàna fo, Loka Nobel laureate 1913 – Richard Nixon, mpanao politika Amerikana, faha-37 Filohanny Etazonia maty taminny 1994 1931 – Algis Budrys, litoanianina-Amerikana mpanoratra maty taminny 2008 1916 – Vic Mizzy, Amerikanina mpamoron-kira maty taminny 2009 1773 – Cassandra Austen, Anglisy mpanao hoso-doko maty taminny 1845 1965 – Farah Khan, mpilalao sarimihetsika Indiana, tale, ary choreographer 1926 – Jani Christou, Ejipsiana-grika mpamoron-kira maty taminny 1970 1940 – Rota Dreifuss, Soisa mp ...
Ambohidrabiby dia tanàna miorina eo antampon-tendrombohitra. Ara-panjakana, ao anatinny Kaominina Ambohidrabiby, distrika Avaradrano, faritra Analamanga ary faritanin Antananarivo io tanàna io. Tao anatinny Kaominina Talata Volonondry izy talohanny volana aprily 2015. Ireo tendrombohitra manodidina azy dia Ambohimanga no eroa ampita andrefany, Ambohitrandriananahary no eroa ampita avaratra antsinanany, Ilafy sy Antananarivo no eroa ampita atsimony. Raha mitaha aminireo tendrombohitra 12 masina ao Imerina kosa dia Ambohidrabiby no eo aminny zoro avaratra-antsinanana. Raha ho any Ambohidrabi ...
Odéam Rakoto dia mpihira, mpanao hatsikana, mpanoratra, ary mpilalao tantara an-tsehatra malagasy. Anisanny ahafantarana azy ny hira hoe "Rankizy Malagasy o!", ny tantara an-tsehatra "Dokotera tsy fidiny"